गाउले जीवन - İngilizce - Nepalce Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: गाउले जीवन (İngilizce - Nepalce)
गाउले जीवन निबन्ध
गाउले जीवन महत्त्व
गाउले जीवन प्रतिष्ठा
essay on गाउले जीवन
निबन्धमा गाउले जीवन
essay on गाउले जीवन in nepali
निबन्धमा गाउले जीवनलाई nepali मा
मेरा जीवन का लक्ष्य engineer
मेरो जीवन का लक्ष्य ईन्जिनियर
बिद्यर्थी जीवन मा अनुसासन को महत्तो
गाउँले जीवन भन्दा सहरीया जीवन राम्रो
gaule jiwan bhanda sahariya jiwan bes in nepali
Google प्रेम यस्तो अमृत हो, जसले मृत्युको आवरणभित्र अनावरण भएको जीवन फर्काउन सक्छ।
एउटा टेलिभिजन च्यानलको कार्यक्रममा एकजना वरिष्ठ जापानी प्राध्यापकले भन्दै थिए–‘नेपालीहरुलाई देखेर मलाई आश्चर्य लाग्यो। यत्रो ठूलो विपद्पछि पनि मुस्कुराइ रहेकै छन् र सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ के भने यस्तो बेला त जतिसुकै विकसित देशमा पनि अराजकता र दंगा हुने थियो, नेपालीहरु असाध्यै संयमित र शान्त छन्।' मलाई मन–मनै लाग्यो यी विदेशी पाहुनाले हाम्रो असली खुबी त देखेकै छैनन्। नेपाली मनको अन्तर्वस्तु बुझ्ने जो कोही पनि दंग पर्न सक्छ। हाम्रो मनका एउटा प्रतिनिधिपात्र सिद्धार्थ गौतमले छँदाखाँदाको दरबार र मोजमस्तीको जिन्दगी उनन्तीस वर्षको यौवनावस्थामा नै सर्लक्क त्यागेर सत्य र शान्तिको खोजीमा जंगलतिर पसे। आफैंले जानी–जानी त्यागिदिएपछि बिग्रिएला, चोरिएला, सिद्धिएला, भत्किएला, मरिएला भन्ने केको चिन्ता? असली डर र चिन्ताको जरो नै लोभ र मोह नाम गरेका मनका वृत्तिहरु रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि सिद्धार्थ गौतम कहिल्यै नबिग्रिने, नभत्किने र नमर्ने सनातन सत्यको खोजीमा लागेका थिए। यो कहानीको उत्कर्ष तब पुग्छ, जब उनी आफूले त्यो परमसत्यसँग साक्षात्कार गरेपछि लाखौंलाई सबै त्यागेर भिक्षुको जीवन जीउन प्रेरित गरे। यी नै सिद्धार्थ आज गौतम बुद्धको नामले विश्वभर प्रख्यात छन् र संसारभरका बुद्धिजीवी, सेलिब्रेटी, वैज्ञानिक र अगुवाहरुका ‘आदर्श गुरु' बनेका छन्। महासाहसीले मात्र आफूसँग भएको कुरालाई त्यागेर कुनै महान् उद्देश्यको बाटोमा जंगलभित्रको कष्टकर जीवनलाई पनि सहजताका साथ स्वीकार गर्न सक्छ, राजमहलको जीवनबाट अचानक हातमा भिक्षाको कचौरा लिएर समाजमा उपस्थित हुन सक्छ। यहि नेपाली मन ‘वीर गोर्खाली' बनेर शताब्दीयौंसम्म लडाईंका हर मोर्चामा सफल भइरह्यो। मात्र एउटा खुकुरीको भरमा एक्लै हजारौं दुश्मनहरुको सातो लिन सक्ने आन्तरिक खुबी यो नेपाली मनमा छ। आज विश्वभर थरले मात्र बहादुर नभएर मुटु पनि बहादुरकै भएको जात भन्ने प्रशस्ती कमाएका छन् हाम्रा जवानहरुले। यी हरफहरु मैले कसैलाई खुसी पार्न या सान्त्वना दिन लेखेको हैन, मेरो अन्तर्हृदयले यहि भन्छ त मैले के गरौं? हाम्रो प्राणमा छुट्टै प्रकारको शक्ति छ र हाम्रो रगतमा बल, जोश तथा साहसको छुट्टै रसायन छ, जुनसंसारका कुनै पनि प्रयोगशालाले पत्ता लगाउन सक्दैनन्। थाकेर पनि नथाक्ने र हारेर पनि नहार्ने हाम्रो लामो परम्परा नै छ। यो महाविपद्को घडीमा पनि यसका प्रमाणहरु प्रचुर मात्रामा भेटिए। दुई दिनअघि मात्र सिन्धुपाल्चोकका केहि अति प्रभावित गाउँहरुमा जीवन विज्ञान केन्द्रबाट राहत बाँड्नेक्रममा एकजना व्यक्तिसित भेट भयो, जसको आफ्ना घर र गोठ दुबै भत्किएका छन् र खाने कुनै खाद्यान्न छैन। राहत बाँड्ने जिम्मा पाएका उनले आफ्ना लागि केहि नराखी सबै अरुलाई बाँडेर सिद्धाए। तपाईंले आफ्नो लागि पनि राखेको भए हुने थियो भन्दा उनले भने–‘मभन्दा बढी प्रभावित अरु धेरै छन्, उनीहरुले पाएपछि बल्ल मेरो पालो।' यसरी पनि नेपाली मन जीवित छ। हाम्रा अग्रजहरुले हजारौं वर्षको चिन्तनपछि परोपकार र सेवालाई धर्मको धुरीमा नै स्थापित गरेका थिए। ‘सेवाहिः परमोधर्म’ भनेर धर्मलाई सेवासँग लगेर जोडिदिएका थिए, जुनआज सबैभन्दा बढी काम लागेको छ। पुन्य के हो र पाप के हो भन्ने उत्तर यति सीधा शब्दमा दिएका थिए–‘परोपकार पुन्याय पापाय परपीडनम्।' भूकम्पछिको उद्धार र राहतको क्रममा यस्ता दर्जनौं पात्रहरु भेटिए, जसले मूल नेपाली संस्कारको प्रतिनिधित्व गर्छन्। शैक्षिक संस्थाहरुको साझा सञ्जाल ‘अपिन' ले गरेको राहत वितरणमा एकजना शिक्षक मित्र भेटिए, जसले आफ्नो भाइलाई वैशाख १२ को पहिलो भूकम्पमा नै गुमाएका थिए। पूरा गाउँका घर ढले र अन्नपानी बेगर नै पालमुनिको बास भयो। गाउँ नै शोकसन्तप्त भयो। ती शिक्षक मित्र भने काठमाडौं आएर आफ्नो र छिमेकी गाउँका लागि राहत खोज्ने र वितरण गर्ने पहल गरे र अहोरात्र खटिरहे। अरुको पेट भर्न आफ्नो भोकको परवाह नगर्ने र अरुको दुःख कम गर्न आफ्नो दुःखको उपेक्षा गर्ने यो पवित्र मन पनि नेपाली मन नै हो। राहत वितरणकै क्रममा हाम्रो टोली एउटा गाउँमा एक ट्रक खाद्यान्न, लुगा, पाल र औषधि लिएर पुग्यो। गाउँ प्रवेश गरेर सामान झार्ने तयारी गर्दा–गर्दै गाउँकै चारजना युवाहरु हस्यांग–फस्यांग गर्दै आएर हाम्रो टोलीलाई रोके। एउटा अन्योलको माहौल नै जन्मियो त्यहाँ। किनभने राहत वितरणमा व्यवधान खडा गरियो भन्ने लाग्यो सबैलाई। तर, ती युवाहरुले दुई हात जोडेर भन्न थाले,–‘यो हाम्रो गाउँमा त राहत बारबार आइसकेको छ। हामीलाई अहिले चाहिन्न। तर, यहाँभन्दा निकै माथि रहेको तामाङ गाउँमा भने अहिलेसम्म कोही पुगेको छैन, त्यहाँ एक गेडा अन्न छैन। उतै लगिदिनुस् न।' एकैछिनमा त्यो अन्योल करुणामा बदलियो र ती युवाहरुको अगुवाइमा हाम्रो टोलीले तामाङ गाउँ पुगेर एक–एकलाई राहत बाँडेर फर्कियो। यी युवाहरुको रुपमा अरुको दुःख देख्ने र अरुका लागि आफूले त्याग गर्न सक्ने मन पनि विशुद्ध नेपाली मन नै हो। विगत केहि दशकयता बुद्धि र विवेक पुर्‍याउन नसक्दा गरिबी, पछ्यौटेपन, अव्यवस्था र अराजकताको खाडलमा हामी खस्दै गएको पनि त्यति नै सत्य हो। तर, हाम्रो मूल ह्रदय र परोपकार, सहकार्य, करुणा, साहस, र सहनशीलता प्रशस्त मात्रामा लुकेर बसेको छ। धेरै लामो समयसम्म निरन्तर अभ्यास गरेर समाजले कमाएका यी गुणहरु हाम्रो मनको आन्तरिक संरचनामा कुँदिएर बसेका छन्। त्यसकारणले त जस्तोसुकै दुःख, असुविधा र प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि हामी सहन सक्छौं र केहि दिनमा नै आफ्नो दैनिकी जीवनमा फर्कन सकिराखेका छौं। थोरै भएपनि छिमेकमा अरुसँग बाँडेर खाने, अैंचो–पैचो गरेर काम चलाउने, मर्दा–पर्दा र बिहे इत्यादिमा गाउँ नै उल्टिएर सबै काम गरिदिने, समूह बनाएर पालै–पालो मेलापात गर्ने जस्ता विश्वमै दुर्लभ कुराहरु नेपाली संस्कृतिका अभिन्न अंग हुन्। सामूहिक कूल–पूजा, दसैं जस्ता चाडपर्वमा गरिने सामूहिक उत्सव, देउराली र चौतारीका वरपर भेला भइ भलाकुसारी गर्ने चलन र पाटी–पौवाका संरचनाले पनि हाम्रो सामाजिक चरित्रलाई जगाइराख्न सफल भएका थिए/छन्। गाउँ–गाउँमा लाग्ने हाटबजारले त सबैलाई एकै थलोमा भेला गराइ किनबेचको माध्यमबाट समाजमा जोडिने र पारस्परिकरुपमा मिलेर साना गाउँले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने काम गरेका थिए। यसरी हाम्रो पूर्खाहरुले मिलेर बस्ने र सामूहिक भाग्यको निर्माण गर्ने एउटा सुन्दरतम् संस्कृतिको नमूना नै हाम्रा लागि बनाइदिएका थिए। त्यही संस्कृतिको लाभांशको रुपमा हामी आज पनि एक छौं, हाँस्न सकेका छौं, एक–अर्काको घाउमा मल्हम–पट्टी गर्न सकेका छौं। करिब एक दशकअघिदेखि नै ‘उपत्यकामा ठूलो भूकम्प आउन सक्छ’ भनेर हजारौं सभा–सेमिनारहरू भए। कसरी बच्ने, कसरी उद्धार गर्ने र के–के कुराको तयारी गर्ने? भनेर सिकाइयो। तर, व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय एवं राजनीतिक हिसाबले ती सबै सभा–सेमिनारहरू बालुवामा हालेको पानी जस्तै सावित भए। यत्रो विपद्सँग लड्न सक्ने किसिमको हाम्रो योजनागत् तयारी केहि पनि रहेनछ भन्ने देखियो। सरकार, राजनीतिक दलहरु र प्रकोपसँग लड्ने हाम्रा संयन्त्रहरु कति दिनसम्म अक्क न बक्क परिरहे। काम लाग्यो त हजारौं वर्षको अभ्यासबाट निर्मित हाम्रै सहयोगी, परोपकारी र मिलीजुली बस्ने संस्कार नै। गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दू बनाएर आएको यो महाभूकम्पले पहाडी जिल्लाहरुमा विनाशको तान्डव लीला मच्चायो। तर, के पहाड, के मधेस, के तराइ सबैको मन उति नै रोयो। अन्नको साझा भन्डार हाम्रो मधेसले दिलो ज्यान लगाएर पहाडका लागि दिनदिनै अन्न संकलन गर्दै पठाउँदै छ। मधेसका एकजना ठूला अन्न व्यापारी मित्रले हिजो (बुधबार) मात्रै भन्दै हुनुहुन्थ्यो–‘हामीसँग तीन महिनालाई पुग्ने प्रशस्त अन्न छ, हामी हुँदा–हुँदै पहाड भोको बस्नु पर्दैन।' यो विपद्ले त सावित नै गरिदियो यो राष्ट्र एक छ, भावना एक छ, नेपाली मन एक छ र संकीर्ण राजनीतिक सोचमा बाहेक यहाँ कहिँकतै विभाजनको रेखा कोरिएको छैन। दिनहुँजसो मेरो फोन, इमेल र सामाजिक भित्ताहरुमा हामी उद्धार र राहतमा खटिन चाहन्छौं, लौ न हामीलाई प्रयोग गरिदिनुस् भनेर युवाहरुले सम्पर्क गरिरहेका छन्। रातदिन प्रभावित व्यक्तिहरुलाई कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ हरेक व्यक्ति चिन्तित छ र आफूले सकेको गरिरहेको छ। केहि मित्रहरुले कुरा गरिरहेका थिए, राहत र उद्धारमा नलागेर घरमै सुतेर बस्ने मान्छेलाई अब ‘देशद्रोही' घोषित गर्नुपर्छ। त्यो कुरा सुन्ने अर्का व्यक्तिले प्वाक्क भने–‘त्यस्तो मान्छे अहिले यहाँ खोजेरै भेटिन्न!' यो महाविपद्ले हाम्रो हजारौं वर्षदेखिको मूल नेपाली संस्कार र सामाजिक भावनालाई फेरि जगाएको छ र फैलाएको छ। हामीले एकजुट हुने र एक–अर्काको घाउमा मल्हम–पट्टी लगाउने अवसर पाएका छौं। ‘हरेक दुःखका पछाडि सुख पनि लुकेको हुन्छ' भन्ने भनाइ अहिले सत्य साबित भएको छ।
एउटा टेलिभिजन च्यानलको कार्यक्रममा एकजना वरिष्ठ जापानी प्राध्यापकले भन्दै थिए–‘नेपालीहरुलाई देखेर मलाई आश्चर्य लाग्यो। यत्रो ठूलो विपद्पछि पनि मुस्कुराइ रहेकै छन् र सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ के भने यस्तो बेला त जतिसुकै विकसित देशमा पनि अराजकता र दंगा हुने थियो, नेपालीहरु असाध्यै संयमित र शान्त छन्।' मलाई मन–मनै लाग्यो यी विदेशी पाहुनाले हाम्रो असली खुबी त देखेकै छैनन्। नेपाली मनको अन्तर्वस्तु बुझ्ने जो कोही पनि दंग पर्न सक्छ। हाम्रो मनका एउटा प्रतिनिधिपात्र सिद्धार्थ गौतमले छँदाखाँदाको दरबार र मोजमस्तीको जिन्दगी उनन्तीस वर्षको यौवनावस्थामा नै सर्लक्क त्यागेर सत्य र शान्तिको खोजीमा जंगलतिर पसे। आफैंले जानी–जानी त्यागिदिएपछि बिग्रिएला, चोरिएला, सिद्धिएला, भत्किएला, मरिएला भन्ने केको चिन्ता? असली डर र चिन्ताको जरो नै लोभ र मोह नाम गरेका मनका वृत्तिहरु रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि सिद्धार्थ गौतम कहिल्यै नबिग्रिने, नभत्किने र नमर्ने सनातन सत्यको खोजीमा लागेका थिए। यो कहानीको उत्कर्ष तब पुग्छ, जब उनी आफूले त्यो परमसत्यसँग साक्षात्कार गरेपछि लाखौंलाई सबै त्यागेर भिक्षुको जीवन जीउन प्रेरित गरे। यी नै सिद्धार्थ आज गौतम बुद्धको नामले विश्वभर प्रख्यात छन् र संसारभरका बुद्धिजीवी, सेलिब्रेटी, वैज्ञानिक र अगुवाहरुका ‘आदर्श गुरु' बनेका छन्। महासाहसीले मात्र आफूसँग भएको कुरालाई त्यागेर कुनै महान् उद्देश्यको बाटोमा जंगलभित्रको कष्टकर जीवनलाई पनि सहजताका साथ स्वीकार गर्न सक्छ, राजमहलको जीवनबाट अचानक हातमा भिक्षाको कचौरा लिएर समाजमा उपस्थित हुन सक्छ। यहि नेपाली मन ‘वीर गोर्खाली' बनेर शताब्दीयौंसम्म लडाईंका हर मोर्चामा सफल भइरह्यो। मात्र एउटा खुकुरीको भरमा एक्लै हजारौं दुश्मनहरुको सातो लिन सक्ने आन्तरिक खुबी यो नेपाली मनमा छ। आज विश्वभर थरले मात्र बहादुर नभएर मुटु पनि बहादुरकै भएको जात भन्ने प्रशस्ती कमाएका छन् हाम्रा जवानहरुले। यी हरफहरु मैले कसैलाई खुसी पार्न या सान्त्वना दिन लेखेको हैन, मेरो अन्तर्हृदयले यहि भन्छ त मैले के गरौं? हाम्रो प्राणमा छुट्टै प्रकारको शक्ति छ र हाम्रो रगतमा बल, जोश तथा साहसको छुट्टै रसायन छ, जुनसंसारका कुनै पनि प्रयोगशालाले पत्ता लगाउन सक्दैनन्। थाकेर पनि नथाक्ने र हारेर पनि नहार्ने हाम्रो लामो परम्परा नै छ। यो महाविपद्को घडीमा पनि यसका प्रमाणहरु प्रचुर मात्रामा भेटिए। दुई दिनअघि मात्र सिन्धुपाल्चोकका केहि अति प्रभावित गाउँहरुमा जीवन विज्ञान केन्द्रबाट राहत बाँड्नेक्रममा एकजना व्यक्तिसित भेट भयो, जसको आफ्ना घर र गोठ दुबै भत्किएका छन् र खाने कुनै खाद्यान्न छैन। राहत बाँड्ने जिम्मा पाएका उनले आफ्ना लागि केहि नराखी सबै अरुलाई बाँडेर सिद्धाए। तपाईंले आफ्नो लागि पनि राखेको भए हुने थियो भन्दा उनले भने–‘मभन्दा बढी प्रभावित अरु धेरै छन्, उनीहरुले पाएपछि बल्ल मेरो पालो।' यसरी पनि नेपाली मन जीवित छ। हाम्रा अग्रजहरुले हजारौं वर्षको चिन्तनपछि परोपकार र सेवालाई धर्मको धुरीमा नै स्थापित गरेका थिए। ‘सेवाहिः परमोधर्म’ भनेर धर्मलाई सेवासँग लगेर जोडिदिएका थिए, जुनआज सबैभन्दा बढी काम लागेको छ। पुन्य के हो र पाप के हो भन्ने उत्तर यति सीधा शब्दमा दिएका थिए–‘परोपकार पुन्याय पापाय परपीडनम्।' भूकम्पछिको उद्धार र राहतको क्रममा यस्ता दर्जनौं पात्रहरु भेटिए, जसले मूल नेपाली संस्कारको प्रतिनिधित्व गर्छन्। शैक्षिक संस्थाहरुको साझा सञ्जाल ‘अपिन' ले गरेको राहत वितरणमा एकजना शिक्षक मित्र भेटिए, जसले आफ्नो भाइलाई वैशाख १२ को पहिलो भूकम्पमा नै गुमाएका थिए। पूरा गाउँका घर ढले र अन्नपानी बेगर नै पालमुनिको बास भयो। गाउँ नै शोकसन्तप्त भयो। ती शिक्षक मित्र भने काठमाडौं आएर आफ्नो र छिमेकी गाउँका लागि राहत खोज्ने र वितरण गर्ने पहल गरे र अहोरात्र खटिरहे। अरुको पेट भर्न आफ्नो भोकको परवाह नगर्ने र अरुको दुःख कम गर्न आफ्नो दुःखको उपेक्षा गर्ने यो पवित्र मन पनि नेपाली मन नै हो। राहत वितरणकै क्रममा हाम्रो टोली एउटा गाउँमा एक ट्रक खाद्यान्न, लुगा, पाल र औषधि लिएर पुग्यो। गाउँ प्रवेश गरेर सामान झार्ने तयारी गर्दा–गर्दै गाउँकै चारजना युवाहरु हस्यांग–फस्यांग गर्दै आएर हाम्रो टोलीलाई रोके। एउटा अन्योलको माहौल नै जन्मियो त्यहाँ। किनभने राहत वितरणमा व्यवधान खडा गरियो भन्ने लाग्यो सबैलाई। तर, ती युवाहरुले दुई हात जोडेर भन्न थाले,–‘यो हाम्रो गाउँमा त राहत बारबार आइसकेको छ। हामीलाई अहिले चाहिन्न। तर, यहाँभन्दा निकै माथि रहेको तामाङ गाउँमा भने अहिलेसम्म कोही पुगेको छैन, त्यहाँ एक गेडा अन्न छैन। उतै लगिदिनुस् न।' एकैछिनमा त्यो अन्योल करुणामा बदलियो र ती युवाहरुको अगुवाइमा हाम्रो टोलीले तामाङ गाउँ पुगेर एक–एकलाई राहत बाँडेर फर्कियो। यी युवाहरुको रुपमा अरुको दुःख देख्ने र अरुका लागि आफूले त्याग गर्न सक्ने मन पनि विशुद्ध नेपाली मन नै हो। विगत केहि दशकयता बुद्धि र विवेक पुर्‍याउन नसक्दा गरिबी, पछ्यौटेपन, अव्यवस्था र अराजकताको खाडलमा हामी खस्दै गएको पनि त्यति नै सत्य हो। तर, हाम्रो मूल ह्रदय र परोपकार, सहकार्य, करुणा, साहस, र सहनशीलता प्रशस्त मात्रामा लुकेर बसेको छ। धेरै लामो समयसम्म निरन्तर अभ्यास गरेर समाजले कमाएका यी गुणहरु हाम्रो मनको आन्तरिक संरचनामा कुँदिएर बसेका छन्। त्यसकारणले त जस्तोसुकै दुःख, असुविधा र प्रतिकूल परिस्थितिलाई पनि हामी सहन सक्छौं र केहि दिनमा नै आफ्नो दैनिकी जीवनमा फर्कन सकिराखेका छौं। थोरै भएपनि छिमेकमा अरुसँग बाँडेर खाने, अैंचो–पैचो गरेर काम चलाउने, मर्दा–पर्दा र बिहे इत्यादिमा गाउँ नै उल्टिएर सबै काम गरिदिने, समूह बनाएर पालै–पालो मेलापात गर्ने जस्ता विश्वमै दुर्लभ कुराहरु नेपाली संस्कृतिका अभिन्न अंग हुन्। सामूहिक कूल–पूजा, दसैं जस्ता चाडपर्वमा गरिने सामूहिक उत्सव, देउराली र चौतारीका वरपर भेला भइ भलाकुसारी गर्ने चलन र पाटी–पौवाका संरचनाले पनि हाम्रो सामाजिक चरित्रलाई जगाइराख्न सफल भएका थिए/छन्। गाउँ–गाउँमा लाग्ने हाटबजारले त सबैलाई एकै थलोमा भेला गराइ किनबेचको माध्यमबाट समाजमा जोडिने र पारस्परिकरुपमा मिलेर साना गाउँले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने काम गरेका थिए। यसरी हाम्रो पूर्खाहरुले मिलेर बस्ने र सामूहिक भाग्यको निर्माण गर्ने एउटा सुन्दरतम् संस्कृतिको नमूना नै हाम्रा लागि बनाइदिएका थिए। त्यही संस्कृतिको लाभांशको रुपमा हामी आज पनि एक छौं, हाँस्न सकेका छौं, एक–अर्काको घाउमा मल्हम–पट्टी गर्न सकेका छौं। करिब एक दशकअघिदेखि नै ‘उपत्यकामा ठूलो भूकम्प आउन सक्छ’ भनेर हजारौं सभा–सेमिनारहरू भए। कसरी बच्ने, कसरी उद्धार गर्ने र के–के कुराको तयारी गर्ने? भनेर सिकाइयो। तर, व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय एवं राजनीतिक हिसाबले ती सबै सभा–सेमिनारहरू बालुवामा हालेको पानी जस्तै सावित भए। यत्रो विपद्सँग लड्न सक्ने किसिमको हाम्रो योजनागत् तयारी केहि पनि रहेनछ भन्ने देखियो। सरकार, राजनीतिक दलहरु र प्रकोपसँग लड्ने हाम्रा संयन्त्रहरु कति दिनसम्म अक्क न बक्क परिरहे। काम लाग्यो त हजारौं वर्षको अभ्यासबाट निर्मित हाम्रै सहयोगी, परोपकारी र मिलीजुली बस्ने संस्कार नै। गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दू बनाएर आएको यो महाभूकम्पले पहाडी जिल्लाहरुमा विनाशको तान्डव लीला मच्चायो। तर, के पहाड, के मधेस, के तराइ सबैको मन उति नै रोयो। अन्नको साझा भन्डार हाम्रो मधेसले दिलो ज्यान लगाएर पहाडका लागि दिनदिनै अन्न संकलन गर्दै पठाउँदै छ। मधेसका एकजना ठूला अन्न व्यापारी मित्रले हिजो (बुधबार) मात्रै भन्दै हुनुहुन्थ्यो–‘हामीसँग तीन महिनालाई पुग्ने प्रशस्त अन्न छ, हामी हुँदा–हुँदै पहाड भोको बस्नु पर्दैन।' यो विपद्ले त सावित नै गरिदियो यो राष्ट्र एक छ, भावना एक छ, नेपाली मन एक छ र संकीर्ण राजनीतिक सोचमा बाहेक यहाँ कहिँकतै विभाजनको रेखा कोरिएको छैन। दिनहुँजसो मेरो फोन, इमेल र सामाजिक भित्ताहरुमा हामी उद्धार र राहतमा खटिन चाहन्छौं, लौ न हामीलाई प्रयोग गरिदिनुस् भनेर युवाहरुले सम्पर्क गरिरहेका छन्। रातदिन प्रभावित व्यक्तिहरुलाई कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ हरेक व्यक्ति चिन्तित छ र आफूले सकेको गरिरहेको छ। केहि मित्रहरुले कुरा गरिरहेका थिए, राहत र उद्धारमा नलागेर घरमै सुतेर बस्ने मान्छेलाई अब ‘देशद्रोही' घोषित गर्नुपर्छ। त्यो कुरा सुन्ने अर्का व्यक्तिले प्वाक्क भने–‘त्यस्तो मान्छे अहिले यहाँ खोजेरै भेटिन्न!' यो महाविपद्ले हाम्रो हजारौं वर्षदेखिको मूल नेपाली संस्कार र सामाजिक भावनालाई फेरि जगाएको छ र फैलाएको छ। हामीले एकजुट हुने र एक–अर्काको घाउमा मल्हम–पट्टी लगाउने अवसर पाएका छौं। ‘हरेक दुःखका पछाडि सुख पनि लुकेको हुन्छ' भन्ने भनाइ अहिले सत्य साबित भएको छ। अब देश एउटा पुनःनिर्माणको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्दैछ। यो महायज्ञमा धन, विज्ञान र सीपको जति महत्व हुन्छ, संस्कार र सामाजिक भावनाको भूमिका पनि त्यति नै अहम् हुन्छ। सहकार्य र हातेमालोको हाम्रो मूलसंस्कृतिमा हामी अडिग रहन सक्यौं भने अब हाम्रो समाजले जुरुक्क उठेर कोल्टो फेर्छ र वास्तवमै नयाँ नेपालको हामी निर्माण ग
lambat lagi (Malayca>İngilizce)ang kahulugan ng malulupig (İngilizce>Tagalogca)sit tibi vita onerosa (Latince>İngilizce)api�ándose (İspanyolca>İngilizce)maksud we stive togetherness (İngilizce>Malayca)以廉价收购我们的精华企业的国家 (Çince (Modern)>Tayca)likelihoodofoccurrence (Lehçe>Danca)air pollution in tamil kadurai (İngilizce>Tamilce)ab integro (Latince>İtalyanca)social desirability (İngilizce>Tagalogca)relation status you want to be with me (İngilizce>Tamilce)pa eiriau sy'n odli (Galce>İngilizce)ito pupunta ako sa school ngayon (Tagalogca>İngilizce)henholdsvist (Danca>İngilizce)example of the letter through (Laoca>İngilizce)pergi tidur (Malayca>İngilizce)m1 enrollment (İngilizce>Fransızca)tinuturuan niyo ako kung paano maging independent (Tagalogca>İngilizce)mga kasabihan sa pag aasawa (İngilizce>Tagalogca)maksud honest (İngilizce>Malayca)kya mai aapki pic dekh sakta hu (Hintçe>İngilizce)kamu ada masaalah dengan bahasa inglish? (Malayca>İngilizce)generous heart (İngilizce>Tagalogca)الجاريتان (Arapça>İbranice)purchases (İngilizce>Portekizce)